दीपकराज गिरीकाे व्यंग्य “केटा केटीहरू डेटिङको लागि ठाउँ चाहिएको छ ! – Life Nepali
दीपकराज गिरीकाे व्यंग्य “केटा केटीहरू डेटिङको लागि ठाउँ चाहिएको छ !
काठमाडौं । नेपालका फिल्म हलहरुमा फिल्मको व्यापार सुक्न थालेको छ । फिल्महरु भटाभट बनिरहेको छ तर व्यापार भने सुक्दै गएको छ । यसै क्रममा निर्माता तथा निर्देशक दीपकराज गिरीले फिल्मको व्यापारको बारेमा आफ्नो समाजिक संजालमार्फत व्यंग्य प्रहार गरेका छन् । दिपकले व्यंग्यमार्फत केटा केटीहरू डेटिङको लागि सुनसान ठाउँ चाहिएको छ ? भन्दै प्रश्न गरी आजकल जुनसुकै फ़िल्म हलमा गए पनि हुन्छ भनेका हुन् ।
आइतबार दिपकले आफ्नो सामाजिक संजालमा भनेका छन्, ”केटा केटीहरू डेटिङको लागि सुनसान ठाउँ चाहिएको छ ? आजकल जुनसुकै फ़िल्म हलमा गए पनि हुन्छ । हरिबिजोक डटकम ..” स्टाटसद्वारा दिपकले हिजोआज फिल्म हलहरू दर्शक नभएर खाली रहेको जानकारी दिएका हुन् । शुक्रबारदेखि रिलिजमा आएको फिल्म ‘माछा माछा’को व्यापार पनि निकै नै कमजो रहेको छ। अभिनेता सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, नम्रता श्रेष्ठ, बिजय बराल जस्ता कलाकार भएको चलचित्र ‘माछा माछा’ले न त समिक्षकको प्रशंसा राम्रो नै पाएको छ । तर हलमा दर्शकको साथ भने पाउन सकेनन् ।
एउटै मितिमा प्रदर्शनमा आएको अर्को चलचित्र ‘माया पिरिम’ हो । यो फिल्मको रिलिज त झन दर्शकले थाहानै पाएनन् । पछिल्लो समय ‘च च हुई, सरौतो, लभ यू हमेशा, माछा माछा, माया पिरिम’ ले बक्स अफिसमा सफल पाउन नसकेकाे हाे ।कात्तिक महिनामा रिलिज भएका ‘बादशाह जुट, घामड शेरे, जीवन काँडा कि फूल, मिस्टर नेपाली’ लगायतका फिल्महरुले पनि बक्स अफिसमा चित्त बुझाउन सकिने व्यापार गरेनन् ।
Previous करोडपति बेहुलाले गरे साइकलमा विवाह, बेहुली लिन पुगे २५ किलोमिटर
Next पारस शाहले चढेको ‘हार्ले डेभिड्सन’ बाइकको कति पर्ला मूल्य?